နန်းမွေစံရဲ့ အလန်းစား ပုံရိပ်လေးများ…. – Shwe Naung
နန်းမွေစံရဲ့ အလန်းစား ပုံရိပ်လေးများ….
N N | April 4, 2021 | Celebrity | No Comments
အမိုက်စား ပုံရိပ်လေး တွေ ကို လူမှု ကွန်ယက် စာမျက်နှာထက် တင်ပေး လေ့ရှိ တဲ့ နန်းမွေ့စံ ကတော့ ပရိသတ် တွေ ရဲ့ ချစ်ခင် အားပေးမှုကို အခိုင် အမာ ရယူထား နိုင်သူလေး ပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။
အမိုက်စား ခန ္ဓာကို ယ်ကောက်ကြောင်း အလှ ကို ပိုင်ဆိုင် ထားနိုင်ခဲ့ တဲ့ သူမက တော့ ပရိသတ်တွေ ရဲ့ အချစ်တော် လေးဆို ရင်လည်း မမှား ပါဘူး။
သူမ ကတော့ ယခု မှာ အလန်းစား ဖက်ရှင်ေ လးကြောင့် ဆွဲဆောင် မှုရှိ တဲ့ အလှ တရားလေး ပေါ်လွင် နေပြီး အမိုက်စား ပိုစ့်လေး တွေပေးနေ ခဲ့ ပါ တယ်။
သူမ ကတော့ ”မောင့်ကို ညတိုင်း ဦးချ ပြီးမှ အိပ်မယ်” ဆို ပြီး အမိုက်စား ပုံရိပ်လေး တွေနဲ့ အတူ လူမှု ကွန်ယက် စာမျက်နှာ ထက် မှာ ရေး သား ထားခဲ့ တာပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။
သူမ ရဲ့ အသည်း ယားစရာ ပုံစံလေး နဲ့ လှပနေ တဲ့ ပုံရိပ် လေးတွေ ဟာ ပရိသတ် တွေ ကို အချစ်တွေ ပိုစေခဲ့ တာ ပဲ ဖြစ်ပါ တယ်
ချစ် ပရိသတ် တွေ အတွက် မော်ဒယ်လ် နန်းမွေစံ ရဲ့ အမိုက်စား ပုံစံလေး နဲ့ ကြွေလောက် စရာ ကောင်းလွန်း တဲ့ ပုံရိပ်လေး တွေ ကို ပြန်လည် ဖော်ပြ ပေး လိုက်ပါ တယ်။
မော်ဒယ်လ် နန်းမွေစံ က တော့ လက်ရှိ မှာ အောင်မြင်လျက် ရှိနေတဲ့ မော်ဒယ်လ် တွေ ထဲ မှာ တစ်ယောက် အပါ အဝင် ဖြစ်ပြီး အနု ပညာ အလုပ်တွေ ကို လုပ်ကိုင်လျက် ရှိနေ ကာ ကြော်ငြာတွေ ကို လည်း ရို က်ကူးလျက်ရှိ နေသူလေး ပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။
အမိုက်စား ဖက်ရှင်လေး တွေ ကို ဝတ်ဆင် လေ့ရှိ တဲ့ သူမက တော့ မိန်းကလေး ပရိသတ် တွေ ရဲ့ ချစ်ခင် အားပေး မှု ရော ယောကျာ်းလေး ပရိသ တ်ေ တွ ရဲ့ ချစ်ခင် အားပေးမှု ကို ပါ အခိုင် အမာ ရယူထားနိုင် ခဲ့တဲ့ မော်ဒယ်လ် တစ်ယောက် ပဲ ဖြစ်ပါ တယ်။
Source & Photo – Nan Mwe San Facebook’s Account
စိတ်ချမ်းသာအောင် ပျော်အောင် လူတိုင်း လူတိုင်း နေနိုင်ဖို့ မလွယ် ကြောင်းကို ရင်ဖွင့် ပြောကြားလာတဲ့ ဘေဘီမောင်…
သဇင်ဦး ရဲ့ အမိုက်စား TIK TOK ဗီဒီယို…..